Ogaden News Agency (ONA) – Xirafaddii Dawarsiga Wuxuu ku Dambeeyay Iibinta Dhiiga Shacabka Itobiya – Noora Afgaab
Xirafaddii Dawarsiga Wuxuu ku Dambeeyay Iibinta Dhiiga Shacabka Itobiya – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ January 28, 2016
Maqaaladii hore waxaan kusoo marnay saddexdii nidaam ee Itobiya ay kusoo dawarsatay anagoo sheegnay in cunsurka Somaligu ahaa marwalba asaaska barnaamijka Abisiinya/Itobiya ay ku baryootanto. Hadaan dulmar kooban oo xasuusin ah ku samayno, marxaladii 1aad waxay ku baryootamayeen in boqortooyadii Abisiinya ee masiixiga ahayd laga badbaadiyo Imaam Axmad Gurey. Waxaa ku xigtay Menilik oo ku baryootamaya in dhulka loo balaadhiyo boqortooyadiisa ah jasiirad ku dhex taala badweyn muslimiin ah, oo dhulka Somalida iyo Suudaan qaar looga soo jaro. Waxaa ku xigay inuu Mengisto ku baryootamo in looga hiiliyo jabhadii WSLF markay xoreeyeen 90% dhulkoodii horey loo siiyay Itobiya. Labada marxaladood ee Abisiinya/Itobiya ku baryootamaysay in la badbaadiyo ama dhulka loo balaadhiyo, kama aanay doonaynin dawladahii taageerada siinayay inay adeegyo u fuliso. Hasa ahaatee waqtiguu Xayle Salaase uu dalka kusoo noqday iyo intii ka dambaysayba, waxaa laga dalbanayay Itobiya inay adeegyo ka fuliso Afrika gaar ahaan Geeska Afrika.
Burburkii gidaarka Baarlin (Berlin wall) ka hor waxaa socday dagaalkii qaboobaa ee labada quwadood ee NATO iyo Warsaw ay ku hardamayeen caalamka gaar ahaan codka Qaramada Midoobay, sidaa daraadeed Itobiya waxaa loo arkayay dhankay marto inay Afrikada madow usoo jiidi karto, wuxuuna ka mid ahaa kaararka ay ku gorgortanto. Wuxuu kusoo kordhiyay boqor Xayle Salaase inuu u diro ciidan Itobiyaan ah oo ka garab dagaalama ciidamadii Mareykanka dagaalkii sokeeye ee 1951kii ka dhex qarxay labada Kuuriya ee (North and South Korea). Waxay noqotay Itobiya dalkii 1aad ee Afrikaan ah ee ka qaybgala hardanka gumaysiga cusub (Neo-colonialsim), iyadoo dalalkii Afrika ee ka xoroobay gumaysiyadii Yurub ay waqtigaa xusuutooda kusii jirtay kumanaankii dhalinyarada ahaa ee Afrika ay ka kaxaxaysteen garabyadii ku dagaalamay caalamka dagaalkii 2aadee aduunka. Waxaa ku xigay ciidan Itobiyaan ah oo boqor Xayle salaase u diray ciidamadii Qaramada Madoobay u ururinaysay Congo 1960kii. Ciidankaa oo markii hore loogu talagalay inay sugaan ka bixitaanka ciidankii gumaysiga ee Belgium-ka. Ciidamadii Qaramada Midoobay ayaa markuu ka qarxay dagaalkii sokeeye ee Bariga iyo kuwa Galbeedka ay kala taageerayeen loo adeegsday inay daraf noqdaan oo dawladihii ree Galbeedka ay ku shaqaystaan. Mar 2aad ayuu boqor Xayle Salaase u muujiyay ree Galbeedka inay Itobiya hayso ciidan ay kaga adeegan karaan meeshay doonaan.
Markii la riday boqor Xayle salaase oo dalka ay qabsadeen ciidankii Dergiga, waxay durbadiiba u wareegeen dhankii Bariga, oo dawladii Somaliyeed ay bahwadaag la lahayd, waxayna muujiyeen inay qaateen mabda’a shuuciyadda. Sidaan horey kusoo xusnay, Itobiya oo u muuqata inay caynaanka u hayso dawladaha Afrika ee ka hooseeya Saxaraha, dawladii Midowga Sofyeeti iyo wixii bahwadaaga la ahaaba waxay u wareegeen dhankii Itobiya iyagoo dagaalka lasoo galey si looga saaro dhulkay ka xoreeyeen jabhadii WSLF iyo jabhadii Eretria ee EPLF gumaysiga Itobiya. Adeegyaday Itobiya u fulin jirtay Mareykanka iyo ree Galbeedka, waxay u wareejisay Ruushka iyo bahdii hantiwadaaga. Arinta oo sidaa ah ayaa xukunka laga qbsaday kooxdii Mengisto, isla waqtigaana waxaa burburay bahdii Shuuciga ee Itixaadka Sofyeeti uu hogaaminayay.
Ethiopian troops ride on a military truck in Somali’s capital Mogadishu December 29, 2006. Somalia’s Prime Minister Ali Mohamed Gedi swept into Mogadishu in an armoured convoy on Friday a day after his Ethiopian-backed forces drove Islamist rivals from the city they had ruled by sharia law since June. REUTERS/Sahal Abdulle (SOMALIA)
Dawladda Mareykanka inkastoo aanay jeclayn jabhadda Ihaadhig/TPLF oo ahayd shuuci xagjireen ah intay la dagaalamayeen ciidankii Mengisto, hadana markay ka adkaadeen Mengisto waxay go’aansadeen Mareykanka siyaasad waaqici ah (pragmatic) inay kula dhaqamaan kooxdan, waxayna ku baraaruijiyeen inay ogolaadaan qawmiyadaha kale ee Amxaarada iyo Oromada ay horgalka u yihiin inay ka qaybgalaan xukunka oo xisbi loo bixiyay EPRDF ay xukunka ku qabsaadaan. Mar kale ayuu Mareykanka dib ugu soo noqday Itobiya, kooxdii Wayaanaha ee xukunka qabsadayna wadadii hore ee diblomaasiyada Itobiya umbay halkii kasii wadeen. Sidaan horey kusoo sheegnay, diblomaasiyadaa Itobiya waxaa asaas u ahaa in danaha ay ka leeyihiin dawladaha waaweyn uga dhex fuliyaan Afrika gaar ahaan Geeska Afrika. Waxaa iyadana dib usoo noqday kaarkii Somalida ay Itobiya adeegsan jirtay, ka dib markii kooxaha xag-jireenka ah ee Al-shabaabka ay ka mid noqdeen argagixisada caalamiga ah ee Qaacida. Mar kale ayay Itobiya noqotay dawlad ciidamadeeda ku shaqaysata.
Mareykanka iyo dawladaha ree Galbeedka askarigooda qiimi weyn ayuu ugu fadhiyaa, noloshiisa iyo dhimashadiisaba. Sidaa daraadeed, ciidamada Mareykanka markay uga dhinteen Dagaalkii Muqdishu 18ka askari iyo 73 dhaawac ah, waxaa maamulkii /weyne Clinton lagu qasbay inuu kasoo baxo Somaliya. Laga bilaabo maalintaa, Itobiya oon dan ka lahayn, ama la odhan karo weyba doonaysaa in lagu laayo halkaa, ayaa laga kireeyey ciidamadeeda u jooga Somaliya la dagaalanka kooxaha mintidka ah.
Kaarkan argagixsa la dagaalanka ah oo Gacan ku-dhiiglayaal badan oo macangag ah (bloody dictators) ay adeegsadaan ayay kooxda TPLF si fiican oo xarfadaysan uga faa’idasatay, waxayna Itobiya aad ugu dadaashaa si aan looga maarmin oo naaskaa u irmaan u gudhin, inay kooxda Shabaabka u sahlaan dhaq-dhaqaaqa iyo sahayda (military logistics), arintaasoo ah mid si fiican looga ogyahay Somaliya.
Hadaan soo ururino maqaaladii taxanaha ahaa, Itobiya waxay labadii boqolee sano ee caalamka aysoo dhex gashay xirfad u yeelatay sida looga dhex kaluumaysto (Dawarsado) dawladaha caalamka oo kolba kaarka soconaya ay u adeegsato, iyadoo marwalba cunsurka Somaliga uu yahay midka ay suuq kayso.